GSTV: Ndị na-azụ ahịa ebumnuche na mgbapụta ahụ nwere ahụmịhe vidiyo dabere na ọnọdụ | Martech Zone
Kwa ụbọchị, ọtụtụ nde ndị America na-abanye n'ụgbọala ha ma na-aga. Fuel elu draịva commutes, azụmahịa, na njikọ; na nke ahụ bụ mgbe GSTV nwere uche ha enweghi nkewa.
Kwa ụbọchị, n'ọtụtụ iri puku ebe, netwọkụ vidio mba ha nwere oge pụrụ iche nke dị mkpa, mgbe ndị na-azụ ahịa na-etinye aka, na-anabata, na-etinyekwu ego taa ma na-emetụta maka echi na gafere. N'ezie, GSTV ruru 1 na 3 ndị okenye America kwa ọnwa, na-etinye ndị na-ekiri ihe na-ahụ ụzọ, ụda, na vidiyo vidiyo na ụzọ dị mkpa na njem ndị ahịa ha.
Ihe omumu banyere GSTV gụnyere itinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ire ahịa mkpọsa ahịa, ịbawanye mgbasa ozi mgbasa ozi, ụlọ ahịa na nleta ndị na-ere ahịa, ibuli elu na mmefu ndị ahịa, ịmatakwu ndị na-ekiri ekiri na ịkụzi, na ibuli na nleta weebụsaịtị.
GSTV na - eme okenye ya na otutu narị nde mmadu n’etiti mmekorita 1 ruo 1 iji mee ka ndi mmadu nwee obi uto, gwaa ihe, jikota, ma nyefee oge nke na-emegharia taa na echi. Uru nke ndị na-ege ha ntị gụnyere:
Mmefu - Onye na-eto eto, nọ n'ọrụ, ndị na-ege ntị bara ọgaranya, na-emefu + 1.7x ọzọ na-eso azụmahịa azụmahịa
Ezigbo Ndị mmadụ - Netwọk nyocha nke Nielsen, na-enweghị bọọlụ, aghụghọ na enweghị DVRing
Nchekwa - Adịchaghị ọdịnaya gwọọ maka ndị na-ege ntị n'ozuzu
njikọ aka - Njem, iri, na-ege ntị, shopping, mmefu, na ndị ọzọ mgbe na-ekere òkè na-akwụsịtụ na njem ha
Ike site na ndị ọbịa pụrụ iche nke GSTV 95 nde gụnyere ike ịlele ndị na-ege ntị na mbụ na-adabere na omume igwe mmadụ ha, obodo ha, na omume ha.
GSTV na - enyere ndị na - ere ahịa aka ị nweta nsonaazụ azụmaahịa na - abawanye ma tinyekwuo mgbasa ozi ha. GSTV ewepụtala ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na nleta mkpọsa, ọtụtụ nde dollar na mbuli ahịa, yana mmụba dị ukwuu na ọnụọgụ akara maka ụfọdụ ndị mgbasa ozi kasịnụ n'ụwa.
GSTV na-agbatị ọdịnaya na Loop Media
Loop Mgbasa ozi, a gụgharia media ụlọ ọrụ lekwasịrị anya nanị na adịchaghị mkpụmkpụ-ụdị video, mara ọkwa ọdịnaya mmekorita na GSTV iji mepụta ma kesaa vidiyo egwu dị mkpụmkpụ, vidiyo vidiyo kachasị ọhụrụ, ihe nkiri ihe nkiri maka ọhụụ ọhụrụ, na mkpokọta ihe nkiri nkiri kacha elu.
Mpempe akwụkwọ a dị mkpirikpi na-enye ohere maka ụdị na ndị ọchụnta ahịa iji leba anya na ndị na-azụ ahịa na mpụga ụlọ.
Tags: akpa oriridata mbụmmanụ ụgbọala mgbapụtaebe mmanugstvnkesa vidiyovideo netwọk